Dibad-joogta iyo Degaanka oo Kala Didsan – Rasaasa News
Dibad-joogta iyo Degaanka oo Kala Didsan
Feb 17, 2014 degaanka, Dibad-joogta, Didsan, iyo, oo Kala
Jijiga, Feb 17, 2014 – Wararka ka imanaya magaalada Jijiga, ee xarunta Ismaamulka Somalia Itobiya [ISI], waxay sheegayaan in maamulka iyo ajaanibta ka soo jeeda Ismaamulka uu madmadow soo kala dhexgalay.
Muddo saddex sano ah, waxaa ku soo qulqulayey magaalada Jijiga, ee xarunta maamulka Somalida Itoobiya boqolaal Ajaanib ah oo ka soo kicitimayay dalalka dibada, gaar ahaana dalalka galbeedka. Kuwaas oo ku soo hirtay heshiis nabadeed oo dhex maray labo urur oo hore mucaarad u ahaan jiray kolkii ay dawlada dhexe ee Atoobiya la heshiiyeen..
Ajaanib badan, ayuu maamulku dibada kaga keenay ujeedo ah in ay dhaqaale heli doonaan, kuwaas oo kolkii dambe ku kala dheereeyey. Arinka dhaqaale helida oo ku salaysan darajada uu qofku ku lahaa dalka Soomaaliya, fahamka dhaqanka maamulka iyo tolaysi. Waxayna arintaasi ku dhimaatay hunguri, iyada oo ay meesha ka baxday danta guud.
Waxaa muuqanaysa in Ajaanib badan ay la dhici waayeen, hab dhaqanka maamulka, kaas oo ku dhisan cabsi galin guud iyo dhaqamo ka fog diinta Islaamka.Waxaana soo muuqatay in dad badani ka niyad jabeen, arkeena in maamulku uusan waxba ka badalayn kuwii hore.
Safarkii masuuliyiinta maamulku ay dibada ku tageen, ayaa xaqiijiyay in ay jirto quus, xiligaas oo uu madaxwaynuhu la kulmay oo kaliya dad ka soo jeeda gabalkiisa iyo dad reer Soomaaliya ah.
Waxaa kale oo iyaduna walaac galisay dadka Ajaanibta ah ee u dhashay degaanka, ugaadhsiga xubnaha mucaaradka iyo u isticmaalka beelaha Soomaalida ah ee ka soo cusboonaaday degaanka. Arintaas oo sharaf dhac ku ah dadka u dhashay degaanka gudaha iyo dibadba, iyaga oo xasuusan dhibaatadii xanuunka badnayd ee ay maamul gabaleedyada Somalidu u gaysteen.
TV-ga, Somalichannel, ayaa dood laggaga hadlayey xaaladii ugu dambaysay ee degaanka ku martiqaaday hogaanka Jaaliyada maamulka iyo xubin ONLF, oo fadhigoodu yahay UK. Waxaana la sheegay in daqiiqadihii ugu dambeeyey ay baaqdeen, dadka matalayey Ismaamulka Somalida Itoobiya [ISI], kuwaas oo diiday xitaa in ay Telefoon kaga qaybqaataan dooda. Diidmadaas ayaa la sheegay in ay ka timid dhinaca Jijiga oo u sheegay xubnaha Jaaliyada in ayna matali karin. Masuuliyiinta degaanka laftigood ayaa waayey kalsoon ay kaga qayb galaan kulanka dooda.
Arinkaasi oo muujinayaa kalsooni darada ka muuqata Ismaamulka iyo Jaaliyaada taageerta.
Ismaamulka Somalida Itoobiya [ISI], ayaa baryahan aad ugu mashquulsan dhisidida Jaaliyado ka difaaca dibada. Arintaas oo aad ugu adkaan doonta Jaaliyaadka dibada, kuwaas oo ka hoos shaqeeya safaaradaha, balse aan lahayn Jaaliyado ka sharciyeysan dalalka ay Joogaan.
Haddii ay noqoto in lagu shaqaaleeyo, si suuq madow ah, waxaa laga yaabaa in ay dhibaato ka soo gaadho dalalka ay dhalashada ka haystaan.
Ma Qusulaa Mise Gudoomiyeyaal Jaaliyad?